Dhageyso Qeybta 2aad Wareysiga Waaliga Baay Iyo Bakool. – Bogga Calamada.com
Dhageyso Qeybta 2aad Wareysiga Waaliga Baay Iyo Bakool.
April 28, 2016 7:28 am Views: 15
Idaacada Islaamiga ah ee Andalus ayaa baahisay qeybta labaad wareysi dheer oo Idaacada ay la yeelatay’iyadoona qeybtaan waaliga lagu weeydiiyay su’aala muhiim ah.
Sheekh Mucalim Geedow Waaliga Wilaayada Islaamiga Baay iyo Bakool ayaa ka hadlay maleeshiyaatka dowlada Ridada ee sida joogtada ah dhaca kaga geysta deegaanada ku dhaw degmooyinka ciidamada Kufaarta Xabashida Itoobiya iyo maleeshiyaatka kabo qaadka u ah Amxaarada ay duulaanka kaga suganyihiin gobalada Baay iyo Bakool.
Waaliga ayaa xusay in ciidamada Mujaahidiinta ay dhowr jeer fashiliyeen qorsha maleeshiyaatka dowlada Ridada ay ku doonayeen iney dhac ugu geystaan dadka shacabaka’wilaayaduna ay sii kordhineysa weerarada ka dhanka ah maleeshiyaatka dowlada federaalka.
Sidoo kale waaliga wilaayada Islaamiga Baay iyo Bakool waxa uu carabaabay in degmooyinka iyo deegaanada wilaayadu ay ka da’een roobabka xilliga Gu’ga kaasi oo si aad ah ay ugu diirsadeen dadka iyo duunyada.
Halkan Ka Dhageyso Qeybta Labaad Wareysiga Waaliga Baay Iyo Bakool.